Nokia 9.3 Pureview ga - enwe ihuenyo 120 Hz na igwefoto MP 108 | Gam akporosis
Anyị ka kwupụrụ banyere ya Nokia 7.3, otu n'ime ụdị HMD Global na-esote na, dị ka asịrị kachasị na-adịbeghị anya banyere ya, ga-akụ ahịa n'usoro nhazi igwefoto a na-ahụbeghị na ekwentị ọ bụla nke ụlọ ọrụ ahụ ma eleghị anya ọ bụghị na ekwentị site na ụdị ọzọ.
Ugbu a, anyị na - ewere ohere ọhụụ a ga - aga n’ihu na - ekwu maka ụlọ ọrụ na ngwa ọrụ ọzọ nke a ga - arụ ọrụ n’okpuru ya. oge obula na nkeji nke ato nke afo a. Ọ bụ ka Nokia 9.3 Dị Ọcha ama nke anyị na-ezo aka na ya.
GSMArena kọrọ akụkọ ọhụrụ a banyere ngwaọrụ ahụ, nke ga-abụ ọkwa ọzọ nke akara Finnish. Na ajụjụ, ọ na-ekwu na asịrị kachasị ọhụrụ banyere Nokia 9.3 PureView kwuru ị ga - enwe ngosipụta nke nwere ume dị elu nke 120 Hz. Tụkwasị na nke a, ọ na-ekwusi ike na ọ gaghị edo anya ma ọ bụrụ na ọ ga-abụ IPS LCD ma ọ bụ OLED teknụzụ teknụzụ, mana, n'ihi asịrị nke igwefoto selfie na ihuenyo na ihe nketa nke Nokia 9, ọ ga-abụ na ọ ga-abụ otu OLED.
Ọ na-egosikwa na ekwentị dị elu nwere ike ịhapụ igwefoto agbapụ n'otu oge maka ntọala nke ọdịnala, nke a gosipụtara Igwefoto isi 108 MP nke Samsung mere ma ọ dịkarịa ala otu igwefoto 64 MP ọzọ. Anyị na-atụ anya ịrụ ọrụ igwefoto dị ukwuu, ihe Nokia enyeghị ya na ụdị ya gara aga.
Akụkọ a na-akọ na-egosi na HMD Global ejirila 24 MP, 20 MP na 48 MP sensọ maka Nokia 9.3 PureView, tupu ọdịda na isi 108 MP na-akpalite; Nke a, na mgbakwunye, na-egosi ọchịchọ nke ụlọ ọrụ ahụ nwere iji nweta nhazi igwefoto kachasị mma maka ekwentị mkpanaka a na-esote, nke na-egosikwa na ọ ga-apụ apụ n'ọhịa nke igwefoto ma ga-emesị tinye ihe nlereanya ahụ n'elu 10 nke DxOMark.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ihuenyo 120 Hz na igwefoto MP 108: ya na ngwakọta a ga-abata na Nokia 9.3 Pureview